SOS VILLAGES D’ENFANTS: Faritra 4 no nisitraka ny tetikasa QUAPEM nandritra ny 3 taona – Madatopinfo
Notanterahana teny Antaninarenina ny alakamisy 15 aprily ny famaranana ny tetikasan’ny SOS Villages d’Enfants izay antsoina hoe : « QUAPEM » na Qualité de l’Acceuil en Protection de l’Enfance à Madagascar ho an’ny teto Analamanga. Tamin’ny alalan’ny famelabelarana ireo vokatra nandritra ny fanatontosana ny tetikasa ny fotoana, ary narahina fanolorana mari-pahatsiarovana ireo mpiantsehatra tao anatin’izany. Araka ny fampahafantarana, faritra miisa 4 no niasan’ny sos villages d’enfants nanatontosana ity tetikasa ity nandritra ny 3 taona : Analamanga, Vatovavy Fitovinany, Vakinankaratra ary Atsinanana. Miisa 11 kosa no akany izay notohanan’ny SOS Villages d’Enfants tamin’ny alalan’ny tetikasa QUAPEM nandritra izany. « Nanatanteraka ny paikady izay handraisana an-tanana ireo ankizy sy ny fanatsarana izany, ny fitantanana ny ivon-toerana, ny fampiroboroboana ny fidiram-bola, ny fampitaovana ny toerana handraisana ny ankizy ary ny fanamafisana ny fampiharana ny miralenta no niompanan’ny tetikasa tamin’ny ankapobeny », hoy ny tompon’andraitra ny tetikasa QUAPEM eto anivon’ny faritra Anlamanga, Razafiarimanana Fideline Hanta. Araka ny fanazavana hatrany, maro no vokatra azo tamin’ny tetikasa QUAPEM toy ny fivoaran’ireo akany ireo na teo amin’ny lafiny ara-pitaovana izany na eo amin’ny fidiram-bola ary izany dia manaraka ny fenitra takian’ny ministeran’ny mponina. Isan’ny karazana tohana avy amin’ny SOS Villages d’Enfants ihany koa mantsy ny fampiofanana ireo mpiantsehatra, ny fitsidihana ireo ankany tsirairay ka nandritra izany no nahitana fa ilaina ny fampitaovana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa handraisana ny ankizy. Tanjona voalohan’ny tetikasa rahateo ny fanatsarana ny fandraisana an-tanana ny ankizy hisitrahan’izy ireo ny zony. Ny AFD (Agence Française de Développement) sy DCI (Gouvernement Princiet de Monaco) moa no nanohana ara-bola ny tetikasa QUAPEM.
FAMPIROBOROBOANA NY FANDRAHARAHANA: Omena sehatra ny tanora malagasy ahafahany manangana ny orinasany
BANKY BMOI: Efa misokatra ho an’ny mpanjifa ny GAB vaovao eny Alarobia